Magaalo Masaajid ku yaallo oo laga helay Itoobiya
Gobolka Harlaa ee bariga dalka Itoobiya ayaa laga helay magaalo qadiim ah oo ay ku yaallaan Masaajid iyo Qubuuro la aaminsan yahay inay isku aasi jireen dadkii Muslimiinta ahaa ee Magaaladan Degenaa.
Magalaadan oo la aaminsanyahay inay qarniyo ka hor ahaan jirtay xarun ganacsi, waxyaabaha haraagoodii la soo faaqay ee dhulka hoostiisa loogu tagay waxa ka mid ah masaajid dhisnaa ilaa qarnigii 12aad iyo qubuuraha.
Madaxa koox culimo ah oo baareysa haraagii hore ayaa sheegay in habka uu u dhisan yahay masjidka ay heleen uu la mid yahay sida masaajidda laga helay koofurta Tanzania iyo Somaliland,oo waxay caddeyn u tahay inuu jiray xiriir taariikheed oo u dhexeeya bulshooyinka Islaamka ee Africa.
Waxa kale oo la helay lacag maar iyo qalin ka sameysan oo Masar laga isticmaali jiray qarnigii 13aad iyo dahab iyo qalin dumarku xiran jireen iyo alaabooyin kale oo laga keenay dalalka Madagascar,Maldives,Yemen iyo Shiinaha.
Beeraleyda gobolka Harlaa ee bariga Itoobiya ayaa in badan waxay meel dhulkooda ka mid ah ka helayeen alaabooyin ay la yaabeen oo ay ka mid tahay lacag sanuud ah oo Shiinaha laga laga isticmaali jiray, taasina waxay dhalisay sheeko xariireed dadku ku sheekeysto oo ah in meeshu tahay aag ay ku noolan jireen dad ka waaweyn dadka caadiga ah oo haddana ka dhaadheer dadka caadiga ah,hase ahaatee culimadii baaritaanku ma ay xaqiijin sheeka-xariirta.
Sidaas darteeed, sanadkan culimadu waxay qodi doonaan dhul kale,waxase inta ka horeysa la darsayaa haraagii ilaa 300 qof oo ku aasan qubuuraha oo waxyaabaha la darsi doono ay ku jirto qaabkii ay wax u cuni jireen iyo wixii ay cuni jireen.
ethiopia MAGAALO qadiimi	2017-06-16
Previous: Qarax ka dhacay iskuul Shiinaha ku yaalla oo dhimasho sababay
Next: Madaxweyne Siilaanyo oo safar gaar ah ku tegay Imaaraadka